Incwadi iveza iqhaza elabanjwa nguJacob Zuma kusungulwa i-ANN7 | News24
Incwadi iveza iqhaza elabanjwa nguJacob Zuma kusungulwa i-ANN7
Cape Town – Lowo owayengumhleli we-ANN7 futhi owayeqashwe ngumndeni wakwaGupta usebhoboze ithumba waveza ukuthi uJacob Zuma waba kanjani nesandla ekwakhiweni kwalesi siteshi sikamabonakude esisakaza izindaba.
Kule ncwadi eveza okuningi, umbhali wayo unekela izwe ngendlela umndeni wakwaGupta owathatha ngayo imisebenzi okwakumele inikezwe abantu baseNingizimu Afria, yanikezwa abadabuka eNdiya.
Incwadi yentatheli yaseNdiya, uRajesh Sundaram, esihloko sithi Indentured - Behind the Scenes at Gupta TV, eshicilelwe yiJacana, izoqala ukutholakala ezitolo ngoLwesithathu.
URajesh Sundaram wafika eNingizimu Afrika ngemuva kwezinsuku ezimbalwa kukade kunomshado wakwaGupta owaqubula umsindo kuleli, owawubanjelwe eSun City ngo-2013.
Wabe eseqokwa njengomhleli we-Infinity Media Networks – okuyigama elisemthethweni le-ANN7.
OLUNYE UDABA: ‘UMengameli Zuma kukhona akufihlayo ngabakwaGupta’
Uthi kepha ngeSonto ekuseni, ngemuva kwamaviki ambalwa, wazithola esebonisana nalowo owayengumengameli uJacob Zuma ngezinto ezihlabahlosile ezithinta lesi siteshi: i-Africa News Network 7.
USundaram uthi ngisho lona leli gama le-ANN7 laqhamuka noZuma. Lesi ngesinye zezambulo ezikushiya ukhexile ezivezwa kule ncwadi.
Lo mbhali ulandisa kabanzi ngezigigaba ezenzeka ngaphambi kokuba kusungulwe lesi siteshi, ngosizo lukaZuma.
Ngesikhathi kunomhlangano ngomhlaka-22 Juni 2013, u-Ajay Gupta watshela uSundaram ukuthi uZuma nguye owaphakamisa igama elithi "Africa News Network".
"Lelo gama lase livele lithathiwe, sase sinquma ukuthi isiteshi sisibize nge-'Africa News Network 7'. Kwakumele senze umengameli azizwe ebalulekile, abone nokuthi iziphakamiso zakhe sizithathela phezulu.
"Uyathanda uma sicela uvo lwakhe nokuthi sisiphathe kanjani lesi siteshi sezindaba. Ufuna ukubona sengathi lesi siteshi ngesakhe ngqo."
UZuma kuthiwa ngokuhamba kwesikhathi watshela izelamani zakwaGupta ukuthi zingayenzi ibe sobala eyokuthi unesandla kulesi siteshi ngendlela ababika ngayo, isiteshi singasale sesibonakala ukuthi ngesakhe ne-ANC.